galmudugnews.com » Sidee Loo Kala qaatay Malaayiinta Doolar ee Soo Gashay DKMG Somalia Part 1
Home » WARARKA » Sidee Loo Kala qaatay Malaayiinta Doolar ee Soo Gashay DKMG Somalia Part 1 Sidee Loo Kala qaatay Malaayiinta Doolar ee Soo Gashay DKMG Somalia Part 1 galmudug on
Jul 17th, 2012 //
No Comment Views 168013Warbixin maalintii Axad shaaca laga qaaday oo ay diyaariyeen Guddiga Qaramada Midoobay u Qaabilsan La Socodka Cunaqabateynta Hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa lagu faahfaahiyey hanti gaareysa malaayiin doolar oo ay lahayd dawlada Soomaaliya taasoo ay xadeen masuuliyiinta ugu sareysa DKMG Soomaaliya.
Warbixinta ayaa daaha ka qaaday faahfaahino buuxa oo muujinaya tirada lacagaha la xaday, meelaha ay ka yimaadeen iyo jawaabihii ay bixyeen masuuliyiinta qaarkood markii wax laga weydiiyey lacagahan deeqaha loo siiyey dawlada ee la xaday.
1- Sheekh Shariif Sheekh Axmed (Madaxweynaha hadda ee DKMG)
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed
Warbixinta ayaa cadeysay in lacag gaareysa 3 milyan oo doolar (USD $3,000,000) oo ay ku deeqday dawlada Cuman uu qeyb ka helay madaxweyne Shariif, taasoo si shakhsi ah uu uga faa’ideystay.
Lacagta dawlada Cuman ay bixisay waxaa loogu talagalay in lagu dhiso ciidamada nabadsugida, balse Sheekh Shariif wuxuu lacagtaasi qeybtii uu ka helay u dhiibtay nin lagu magacaabo Cabbaas Sheekh Maxamed Jamaalo (ama Jimcaale) oo ka soo jeeda beesha Agoonyar/Harti Abgaal/ Abgaal oo ah beeshauu ka soo jeedo madaxweyne Shariif. Cabaas iyo Shariif, ka sokow inay isku reer yihiin waxaa ka dhexeeya hawlo ganacsi, sida lagu cadeeyay warbixinta Guddiga Qaramada Midoobay.
Warbixinta ayaa ka soo xigatay saraakiil ka tirsan dawlada oo hadda jooga, iyo qaar hore dawlada ula shaqeyn jiray in Cabaas Sheekh Maxamed uu horey u bixin jiray raashiinka iyo tasiilaadka ciidamada amaanka ee dawlada Soomaaliya. Cabbaas axaa uu leeyahay shirkad lagu magacaabo A.S.M.J General Trading Company taasoo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee Imaaraadka Carabta, waxayna shirkaddan ku diiwaangashan tahay shirkad Kenyan-Somali ah.
Waxaa kaloo la tilmaamay Danjire Sheekhey oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya u jooga Dubai oo saaxiib dhow la ah Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan.
Warbixintu waxay sheegtay in dhaqaale ka badan 30% lacagta guud ee dawlada Soomaaliya soo gashay (una dhiganta afar meelood meel 1/4) ay ku baxday xafiisyada saddexda masuul ee ugu sareysa dawlada KMG ee kala ah xafiiska madaxweynaha, xafiiska raysul wasaaraha iyo xafiiska afhayeenka baarlamaanka. Sanadkii 2011, saddexdan xafiis markii la isu geeyo waxay isticmaalaan lacag kor u dhaafeysa US$12.6 million (Labo iyo Toban Milyan iyo Lix Boqol Kun Doolar), waxayna lacagtaasi u dhigantaa 23% miisaaniyada guud ee dawlada ee sanadkaasi.
Waxaa yaab noqotay in halka saddexda xafiis ay lacagta intaasi gaareysa ku takrifaleen in dhammaan wasaaradihii kale ee dawlada ee laga rabay adeegyada aas aasasiga marka la isku daro, ay isticmaaleen US$15.4 million (Shan iyo Toban Milyan iyo Afar Boqol Kun Doolar).
2- Shariif Xadan Sheekh Aadan (Afhayeenka xilka laga qaaday)
Warbixinta ayaa sheegtay in Shariif Xasan uu mudo dheer waday xatooyada xoolaha dawlada isla markaana uu saaxiibadiisa gaarka ah u saxiixay qandaraasyo gaar ah tan iyo markii loo magacaabay wasiirka maaliyadda ee DKMG ah sanadkii 2009 xilligaasi oo uu raysul wasaare ahaa Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke.
Shariif Xasan wuxuu lacag dhan saddex milyan (USD $3,000,000) ka helay dawlada Cuman oo ah lacag ay kala qeybsadeen isaga iyo Madaxweyne Shariif, lacagtaasoo dawlada la soo gaarsiiyey bishii April 2009. Wuxuu sidoo kale hal milyan (USD $1,000,000) ka qaatay shirkadda SKA Air Logistics oo uu isaga gacantiisa ugu saxiixay garoonka iyo dekeda magaalada Muqdisho.
Shariif Xasan wuxuu saami ganacsi ku leeyahay hawlo ganacsi oo ay wada leeyihiin isaga, Gen C/laahi Gaafow oo ah ninka madaxda ka ah Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha iyo nin lagu magacaabo Shariif Axmed Bacalawi. Saddexdooda waxay la shirkoobeen shirkad lagu magacaabo Mondial Technology Information oo la siiyey qandaraaska sameynta baasaboorka cusub (E-Passport) oo fadhigeedu yahay Dubai.
Shariif Xasan wuxuu dawlada Suudaan kula heshiiyey in loo daabaco lacag Shilin Soomaali ah oo qiimeheedu yahay 1,000 Sh.So, 2,000 Sh.So, 10,000 Sh.So, 20.000 Sh So iyo 50,000 Sh. So. Lacagtaasi ayaa daabacaadeedu ku kacaysaa $150 million oo doolar. Lacagtaasi waxaa daabacaysa shirkadda Sudan Currency Printing Press (SCPP) oo ku taalla magaalada Khartoum.
Haweeney lagu magacaabo Khadiijo Cosoble ayaa iyaduna la sheegay inay shirkaddan weydiisatay inay lacag Shilin Soomaali ah u daabacdo.
Warbixinta guddiga waxay tilmaantay in Shariif Xasan, sanadkii 2010 uu ka hirjeestay guddi maaliyad oo uu sameeyay raysul wasaarihii xilligaasi Cumar C/rashiid. Guddigaasi waxaa madax u ahaa C/risaaq Fartaag waxayna soo bandhigeen hal warbixin oo ka hadlaysay xaalada dhaqaale ee wadanka laakiinShariif Xasan oo ahaa wasiirka maaliyada ayaan ku farxin guddiga wuxuuna la kaashaday madaxweyne Shariif oo saaxiibkiisa ahaa in guddiga lakala ceyriyo.
E-Passport oo ganacsi laga furtay
Gen Cabdullaahi Gaafow
Warbixinta Guddiga Qaramada Midoobay ayaacadeysay in baasaboorka cusub ee Soomaaliga uu noqday ganacsi laga taajiray iyadoo xitaa xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab loo sameeyay baasaboorka. Guddiga Qaramada Midoobay waxay xaqiijiyeen in nin ka mid ah saraakiisha sare ee Al-Shabaab la siiyey baasaboorka nooca diblomaasiga iyadoo ay u fududeeyeen saraakiil ka tirsan DKMG ah. Waxaa kaloo jira, sida warbixintu sheegtay inay jiraan dad ka tirsan Al Shabaab oo labo baasaboor heysta.
Mid ka mid ah ragga ugu sareeya kooxaha burcad badeeda ayaa isaguna la siiyey baasaboorka diblomaasiga oo leh sawirkiisa iyo magaciisa, waxaana gacan ka geystay saraakiil dawlada ku jira.
Warbixinta ayaa cadeysay in mudadii u dhexeysay 2007 illaa 2010 hal shilin oo kayimid baasaboorka cusub sameyntiisa uusan u xaroonin wasaaradda maaliyada ee DKMG ah, halka mudaddii u dhexeysay July 2010 illaa December 2011, lacag gaareysa US$1.5 million (Hal Milyan iyo Bar Doolar) oo ka soo xarooday bixinta baasaboorka la waayey meel ay ka baxday.
3- C/weli Maxamed Cali Gaas (Raysul wasaaha hadda ee Dawlada)
Guddiga qoray warbixinta waxay sheegeen in raysul wasaare C/weli Gaas uu maalin kasta waraaqo u diro xafiiska canshuuraha ee dekeda Muqdisho isagoo ka codsanaya in canshuurta laga dhaafo shirkado iyo shakhsiyaad uu ku sheego inay dawlada adeeg u qabanayaan.
Raysul wasaare Cabdiweli Gaas
Raysul wasaare Gaas waxaa lagu eedeeyay in xukuumadiisu ay heshay lacag gaareysa $15 milyan oo doolar (usd $15 Million dollars) oo ahayd deeq ka timid dawlada Imaaraadka Carabta UAE. Laakiin lacagtaasi markii la weydiiyey raysul wasaare Gaas wuu beeniyey wuxuuna sheegay in xukuumadii isaga ka horeysay ee Raysul wasaare Farmaajo loo dhiibay lacagtaasi oo uu cadadkeeda ku sheegay $10,000,000 (Tobam Milyan) isla markaana $3.5 milyan oo ka mid ah si khaldanu isticmaaleen, waa sida laga soo xigtay C/weli Gaas.
C/weli Gaas waxaa kaloo ku maqan hal milyan oo doolar (USD $1.000,000) oo ka timid dawlada Koonfurta Suudaan, taasoo xafiiska raysul wasaare Gaas uu qariyey halka ay martay.
Guddiga warbixinta qoray waxay sheegeen, in lacagta Koonfurta Suudaan ku deeqday horaantii sanadkan 2012 la soo marsiiyey shirkad lagu magacaabo Price Waterhouse Coopers, waxaana ujeedada lacagtaasi ayahayd in lagu teegeero dib u heshiisiinta iyo xasilinta goobaha laga xoreeyay Al-Shabaab ee gacanta dawlada soo galay. Dukumintiyo ay heleen Guddiga Qaramada Midoobay iyo masuuliyiin Soomaali ah ayaa xaqiijiyey in lacagtaasi ay soo gaartay dawlada waxayna warbixintu sheegtay in Raysul wasaare C/weli Gaas uu amray wasiirkiisa maaliyadda inuu lacagtaasi siiyo shakhsiyaad, xildhibaano iyo siyaasiyiin waaweyn, halka US$121,700 (Boqol iyo Kow iyo Labataan iyo Toddobo Boqol Kun Doolar) ay ku baxday xafiiska raysul wasaare Gaas oo kaliya.
Markii raysul wasaare Gaas la weydiiyey halka ay mareen lacagahan iyo in lagu bixiyey arimaha dib u heshiisiinta ma jirin wax jawaab ah oo laga helay.
4- Maxamed C/laahi Farmaajo (Raysul wasaarihii hore Dec 2010- June 2011)
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
Raysul wasaaraha hadda jooga C/weli Gaas wuxuu Farmaajo ku eedeeyay inuu si xun u maamulay lacag gaareysa $3.5 (Saddex Milyan iyo Bar oo doolar) taasoo qeyb ka ahayd $10,000,000 (Toban milyan oo Doolar) oo dawlada Imaaraadka Carabta UAE ugu deeqday xukuumadii Maxamed C/laahi Farmaajo.
Guddiga Qaramada Midoobay waxay xaqiijiyeen in ka sokow tobanka milyan ee doolar ee loogu deeqay xukuumadii Farmaajo, ay jirtay shan milyan oo doolar ($5,000,000) oo loogu deeqay xukuumada C/weli Gaas.
C/weli Gaas wuxuu Guddiga Qaramada Midoobay ee warbixintan qoray u sheegay in dawlada Imaaraadka ay bixisay toban milyan oo doolar lacagtaasoo loo dhiibay xukuumadii Farmaajo, hase yeeshee kaliya $6.500,000 (Lix Milyan iyo Shan Boqol kun doolar) la geeyay Bangiga Dhexe. C/weli Gaas wuxuu intaa ku daray in US$5,000,000 (Shan Milyan oo Doolar) oo ay bixisay Dawlada Imaaraadka loo dhiibay maamulkiisa taasoo gebi ahaanteed uu sheegay in la geeyey Bangiga Dhexe. Laakiin Guddiga Qaramada Midoobay waxay sheegeen inaan la xaqiijin karin sheegashada ah in lacagta shanta milyan la dhigay Bangiga Dhexe.
Sidoo kale waxaan la ogeyn sababta uu wasiirka maaliyada DKMG ah u sheegay lacag ka badan inta uu raysul wasaaruhu sheegay.
Eedeymaha ka dhanka ah Farmaajo illaa hadda waxba lagama weydiin, sida guddigu ay ku sheegeen warbixintooda.
5- C/raxmaan Maxamed Faroole (Madaxweynaha Puntland)
Guddigu waxay madaxweyne Faroole ku eedeeyeen inuu ka faa’ideystay shirkado shisheeye oo uu dalka keenay isagoo ku xadgudbay cunaqabateynta hubka ee Qaramada Midoobay horey u saartay Soomaaliya.
Guddigu waxay warbixintooda ku sheegeen in shirkadda African Oil oo madaxweyne Faroole heshiis horey ula galay ay keentay shirkad lagu magacaabo Pathfinder Corporationtaasoo amaanka qaabilsan, waxayna shirkadan ka hawlgashaa gobolada waqooyiga Soomaaliya (Puntland)waxayna qeyb ka tahay kooxda “Puntland Exploration Security Unit” ooloogu talagalay amaanka goobaha laga baarayo shidaalka ee ku yaalla Puntland.
Kooxda “Puntland Exploration Security Unit” iyo shirkaddanPathfinder Corporation ayaa la sheegay inay qalab militari u geeyeen Puntland iyadoo kharashka iyo mushaharkana ay bixisay shirkadda African Oil.
Guddiga waxay tilmaameen in madaxweyne Faroole uu heshiisyo la galay shirkado amaan uuna si cad ugu xadgudbay cunaqabateynta hubka ee Qaramada Midoobay ay saartay Soomaaliya taasoo tirsigeedu ahaa Security Council resolution 733 (soona baxay sanadkii 1992).
Saracen iyo Puntland
Guddiga Qaramada Midoobay waxay sheegeen in Shirkadda Saracenoo ah shirkad ay leeyihiin calooshood u shaqeystayaal ka hawlgabay ‘Balackwater iyo CIA’ ay ka hawlgasho deegaanada Puntland iyadoo aysan jirin wax sharci ah oo ay ku joogaan. Saracen waxay leedahay in ka badan 1,000 askari ooku qalabeysan hubka culus iyo diyaarado waxayna toos uga amar qaataan madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole, sida ku qoray warbixinta Guddiga.
Faroole markii la weydiiyey arimahan, waxay guddigu sheegeen inuusan u soo jawaabin isla markaana maamulka Puntland uu u muuqdo mid diidan shaqada guddiga caalamiga ah uu hayo.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139653 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31896 hitsContact US - 30627 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26186 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25655 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25309 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23909 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23077 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22448 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22382 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21483 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21152 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21151 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20855 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19893 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19887 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19288 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18524 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17831 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17778 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17698 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16911 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16856 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15548 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15503 hits Home Contact US